“Iigu Yeera Inaan Ahay Qof Cayilan – Waxaan Joogteyn Doonaa Gool Dhalinta” Higuain Oo Ka Jawaabay Sawirkii Laga Bixiyay Muuqaalkiisa - Wargane News
Home Sports “Iigu Yeera Inaan Ahay Qof Cayilan – Waxaan Joogteyn Doonaa Gool Dhalinta”...
Weeraryahanka Juventus Gonzalo Higuain ayaa dib isaga weerary qof walba oo shaki galisay muuqaalkiisa kadib markii uu lacago qaali ah ugu yimid kooxda Turin ka dhisan xagaagan kadib markii uu gool ku daah furtay waayahisa Bianconerri.
Xidigaan reer Argentina ayaa ugu dambeyntii kusoo biiray Juventus bishii July isagoo soo afjaray noloshii kooxda Napoli oo uu wacdaraha ku dhigay xagaagii laga soo gudbay ee Serie A-da markii uu rikoor ku qaaday gooldhalinta horyaalka.
Higuain ayaa ku guuleystay inuu dhaliyo goolka guusha kooxdiisa kulankii furitaanka Horyaalka markaas oo ay 2-1 dirqi ah kaga badiyeen Fiorentina, wuxuna dib isaga weerary qof walba oo shaki galisay iyadoo saxaafadda kubadda cagta ay wax badan wax ka qoreen muuqaalkiisa markaas oo ay ku sheegeen inuu xidigaan aad u cayilay.
“Wey fiican tahay hadii aad joogteysaan inaad iigu yeertaan inaan cayilanahay/buuranahay, si aan anigana u joogteeyo dhalinta goolasha” ayuu yiri Higuain oo u waramayay Tuttosport, “Waxaan tababartay 20-maalmood, sida daacadda ah ma fahmin gabi ahaan waxa keenay iney xiiseyaan xaaladeysa”
Dhanka kale Gonzalo Higuain ayaa riyo u rumowday ku tilmaamay goolka uu dhaliyay kulankiisii ugu horeeyay isagoo aad u faraxsan inuu kooxdiisa guul u horseeday.
“Waligey waan ku riyoon jiray habeen sidaan oo kale ah, balse wax badan ma aysan rumoobin” Ayuu yiri.
“Waqtigaan wax walba waxey ku socdan riyo, Goolka? marka aad banaanka joogto wey kula fududahay, balse waxaan kuu xaqiijinayaa iney tahay mid aad u adag”